Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Vaovao Mafana tamin’ny Marsa 2013
Vaovao Mafana · Marsa, 2013
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Marsa, 2013
Misaona Ny Fahafatesan'ny Filoha Chávez ny Kiobàna
Lahatsoratra [es] nosoratan'ny La Redacción IPS Cuba, navoaka voalohany tao amin'ny Sampan-gazety IPS-Inter Olom-pirenena marobe no naneho ny fahakiviny sy ny alahelony tamin'ny alalan'ny media sosialy noho ny fahafatesan'i Hugo Chávez. “Mbola mampangovitra anay hatrany ny vaovao, sarotra inoana. Lalina sy mandratra fò ny alahelo, saingy tsy maintsy manome voninahitra ireo...
Amerika Latina06 Marsa 2013
Tamin'ny 5 Marsa 2013, no nandrenesan'izao tontolo izao ny fahafatesan'ny [mg] filohan'i Venezuela, Hugo Chavez Frias. Nangoninay ny fihetseham-po voalohany nifampizarana tao amin'ny tambajotra sosialy, indrindra fa izay hitao tao amin'ny Twitter tamin'ny alalan'ny fanarahana ny tenifahatra #MuereChávez (Maty i Hugo Chávez).
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana06 Marsa 2013
Nilaza ny printsy Saodiana androany fa tsy milefitra amin'ireo vehivavy midina an-dalambe [hanao fihetsiketsehana] ny lehilahy misaina. Taorian'izany fanambarana navoakan'ny governora lefitry ny faritany Al Qassim, Faisal bin Mishal izany, niharan'ny famoretana ny sit-in nokarakarain'ireo vehivavy mitaky ny fanesorana ny Minisitry ny Atitany tamin'ny Alatsinainy teo, tao an-tanànan'i Buraida, ao Arabia Saodita. An-jatony ireo...
Azia Atsinanana05 Marsa 2013
Isiraely Mampiditra Zotra Mitokana ho an'ny Jiosy ho an'ny Arabo
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana05 Marsa 2013
Nampihatra Bus [zotra] misaraka ho an'ny Jiosy sy ny Arabo, mampitohy an'i amoron'i Jordania amin'Isiraely nanomboka androany [4 marsa 2013] i Isiraely. Niontana tamin'izany vaovao izany ny mpiserasera, milazalaza an'i Isiraely ho mampihatra ny fanavakavahana sy ny apartheid.